जीवनमा पद प्राप्ति कहिले पनि ठूलो विषय बनेन : महेश बस्नेत | ईमाउण्टेन समाचार
काठमाडौं । नेकपा एमालेका नेता महेश बस्नेतले आफ्नो राजनीति जीवनमा पद प्राप्ति कहिले पनि ठूलो विषय नबनेको बताएका छन् ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको मन्त्रीमण्डलमा गृहमन्त्रालय पाउने चर्चामा रहेका बस्नेतको नाम सहभागी नभएपछि बस्नेतले सामाजिक सञ्जालमार्फत यस्तो अभिव्यक्ति दिएका हुन् । उनले आफू पार्टी नीति, नेतृत्व र निर्देशन सदैव पालना गरेर अगाडि बढेर आफ्नो दक्षता देखाएको उल्लेख गरेका छन् ।
बस्नेतले लेखेका छन्, – ‘मेरो राजनैतिक जीवनमा पद प्राप्ति ठूलो विषय कहिले बनेन् । पार्टी नीति , नेतृत्व र निर्देशन सदैब पालना गरेर अगाडि बढेको छु । परिभाषित काममा सदैब आफ्नो दक्षता देखाएको छु। पार्टी भित्र मात्र होइन बाहिरका मान्छेलाई समेत प्रभाब र दबाब पर्ने गरी काम गरेको छु।’
बस्नेतले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र भक्तपुरमा आम जनताको र देशभरको एमाले कार्यकर्ता र युवा पंक्तिको मन जित्न सफल भएको दाबी गरेका छन् । उनले मन्त्रीमण्डल पुनर्गठनको समयमा आफ्नो नाम पटक पटक आउने र कतिले समर्थन र कति विरोध गर्ने उल्लेख गरेका छन् । उनले विरोध गर्नेहरुलाई झन् धेरै धन्यवाद दिएका छन् ।
मिडियामा आएजस्तो आक्रोशित र गुट फेर्ने चेतावनी दिएको भन्ने कुरामा कुनै सत्यता नरहेको समेत स्पष्ट पारेका छन्।
राजनीति‐मा वर्गिकृतmaheshbasnet, NekapaYemale
भ्रष्टाचार गरे ओलीलाई नी कारवाही हुन्छ, कुलमान को हुन र ? : महेश बस्नेत (भिडियोसहित)
प्रतिनिधिसभाको सभामुख पद कांग्रेसले पाउनुपर्छ : नेता बस्नेत
भक्तपुर २ : ढुंगाना र बस्नेतको आ-आफनै दाबी, कसले मार्ला बाजी ?
मन्त्री र सांसद पद गएपनि माओवादीमा फर्किन्न : मन्त्री रायमाझी
मुलुकलाई समृद्ध बनाउन सबैको साथ चाहिन्छ : बस्नेत